FAQs |Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Fanontaniana dimy tokony ho fantatra alohan'ny hisafidianana haingana ny vokatra mety indrindra
Alohan'ny hisafidiananao ny vokatra vita amin'ny karbida simenitra, raha milaza aminay ny filanao amin'ireo lafiny dimy ireo ianao, dia hanoro haingana ny fitaovana sy vokatra mety aminao ny teknisianinay.Izany dia hamonjy anao be ny fotoana sy ny fandaniana.Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana sy ny fitaovana carbide simenitra dia hahatratra ny fahombiazan'ny fanodinana tsara indrindra.
F: Mikarakara metaly na hazo ve ianao?Inona no akora voahodina?
A: Ny orinasanay dia manana karazana carbide simenitra mihoatra ny 30, ary ny kilasy tsirairay dia manana ny fepetra fanodinana mety indrindra.Aorian'ny fahazoanao ny zavatra fanodinana anao, ny teknisianinay dia afaka mifanandrify tsara amin'ny fitaovana mety indrindra ho anao, Avelao ny fitaovana hahatratra ny fampisehoana tsara indrindra.
F: Mila mividy fitaovana karbida tungstène ve ianao na fitaovana fanapahana karbida?
A: Ny orinasanay dia mizara ho sokajy roa ny vokatra araka ny endriky ny vokatra, fitaovana carbide simenitra sy fitaovana carbide simenitra.Ny vokatra ara-materialy dia misy tsorakazo simenitra carbide, takelaka carbide simenitra, carbide ho an'ny bobongolo sy maty ary banga carbide simenitra isan-karazany, sns.
Ny fitaovana carbide dia fitaovana fanapahana carbide ampiasaina amin'ny sehatra isan-karazany.Rehefa avy nanazava ny filana izahay dia hanana ekipa matihanina hanome anao serivisy 24 ora iray isaky ny iray.
F: Manana fepetra avo lenta manokana ve ianao amin'ny fanodinana marina & fandeferana ny vokatra?
A: Amin'ny ankapobeny, dia miroso araka ny fenitra iraisam-pirenena fandeferana dimensional, izay mahafeno ny fepetra takian'ny ankamaroan'ny mpanjifa.Na izany aza, raha manana fepetra manokana momba ny fandeferana ny haben'ny vokatra ianao, azafady mba ampahafantaro anay mialoha, satria ny vidin'ny vokatra sy ny fotoana fandefasana dia tsy mitovy.
F: Inona no marika sy kilasy amin'ny fitaovana carbide ampiasainao ankehitriny?
A: Raha azonao atao ny manome ny marika ny karbida simenitra ampiasainao ankehitriny, fampahalalana momba ny fananana simika, fananana ara-batana, ny teknisianinay dia hifanaraka haingana sy marina amin'ny fitaovana tsara indrindra ho anao.
F: Ny fahamarinan'ny kalitao sy ny fotoana nitarika
A: Ny orinasanay dia orinasa carbide simenitra matihanina izay mamokatra akora vita amin'ny tungstène karbida mankany amin'ny vokatra vita amin'ny orinasanay manokana, ka ny rohy famokarana rehetra dia fehezin'ny tenantsika.Ny orinasanay dia miasa mafy mifanaraka amin'ny fanamarinana rafitra kalitao ISO2000, izay afaka miantoka ny fahamarinan'ny kalitaon'ny vokatra tsirairay.Ny vokatra mahazatra dia azo alefa ao anatin'ny 3 andro, ary ny vokatra namboarina dia azo alefa ao anatin'ny 25 andro.